အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ဆီးက်ိတ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာ … | Vibhavadi Hospital Myanmar
ဆီးက်ိတ္ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေပးေနလဲ?
ဆီးက်ိတ္ဟာ အမ်ိဳးသားမ်ိဳးပြားအဂၤါ တစ္ခုျဖစ္ျပီး သစ္ၾကားသီးပံုသ႑န္ ရွိပါတယ္။
ဆီးက်ိတ္ဟာ သုတ္ေကာင္မ်ား ရွင္သန္သြားလာႏုိင္ရန္ သယ္ေဆာင္ေပးေသာ သုတ္ရည္ၾကည္ (Semen) တစိတ္တပိုင္း ထုတ္လုပ္ေပးၿပီး သုတ္ေကာင္မ်ား အတြက္ ေခ်ာဆီ ႏွင့္ အဟာရအျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ထို႕အျပင္ ဆီးက်ိတ္ၾကြက္သားမ်ားဟာ သုတ္ပိုးမ်ားေရြ႕လ်ားဖို႕ ညွစ္ကူေပးပါတယ္။
ဆီးက်ိတ္္ကင္ဆာ အေၾကာင္း …
ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ကင္ဆာေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ျပီး ျပန္႔ပြားမႈႏႈန္း ေႏွးေကြးပါတယ္။
ဒါေပမယ့္္လည္း အခ်ိန္မွီထိေရာက္ေသာ ကုသမႈမရရွိခဲ့ပါက အသက္အႏၱရာယ္ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။
တခ်ိဳ႕ေသာ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာေတြဟာ အလြန္ဆုိးရြားေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနတတ္သည့္အျပင္ ပ်ံ႕ပြားမႈ ႏႈန္း ျမန္ဆန္တာေၾကာင့္ ေစာလ်င္စြာ ေရာဂါရွာေဖြကာ အခ်ိန္မွီထိထိေရာက္ေရာက္ ကုသမႈခံယူရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
ဆီးကိ်တ္ကင္ဆာကို ေစာလ်င္စြာ သိရွိျပီး ထိေရာက္စြာ ကုသလိုက္ႏုိင္ပါက ေရာဂါပ်ံ႕ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး လူ႔သက္တမ္းတေလ်ာက္ က်န္းက်န္းမာမာ ေနထုိင္သြားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အျခားေသာ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားနည္းတူ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာဟာလည္း ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ ေသခ်ာမသိရေပမဲ့ ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြကေတာ့ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာျဖစ္ျခင္းကုိ ပုိမိုုအားေပးေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိထားပါတယ္။
မ်ိဳးရိုးတြင္ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာရွိျခင္း (အဖိုး၊ အေဖ၊ ဦးေလး၊ အစ္ကို စသည္…)
ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာေရာဂါဟာ ဘယ္လို လကၡဏာမ်ိဳးေတြရွိျပေလ့ရွိသလဲ ?
ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အစပထမပုိင္းတြင္ လကၡဏာ ျပေလ႔မရွိၾကပါ။
ေရာဂါရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဆီးက်ိတ္ၾကီးေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္သည့္ –
(အထူးသျဖင့္ ညပိုင္းတြင္) ဆီးခဏခဏ သြားရျခင္း
တျဖည္းျဖည္းဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ –
ခါးေအာက္ပိုင္း၊ တင္ပဆံု ႏွင့္ ဆီးခံု စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ နာက်င္ကုိက္ခဲျခင္း
ေျခေထာက္ အားနည္းျခင္း ႏွင့္ ထံုက်င္ျခင္း စသည့္လကၡဏာ မ်ားျပသတတ္ပါတယ္။
ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာေရာဂါကို ေစာစီးစြာသိႏိုင္ပါသလား ?
သင့္ရဲ့ေသြးထဲမွ PSA (Prostate Specific Antigen) လို႕ေခၚတဲ့ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာဓါတ္ ျမင့္မားမႈပမာဏကို တိုင္းတာျခင္းျဖင့္ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ ရွိ/ မရွိ ေစာစီးစြာ သိရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္၍ PSA (Prostate Specific Angitigen) လို႕ေခၚတဲ့ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာဓါတ္ ျမင့္မားေနျပီ ဆိုပါက ေသခ်ာေစရန္ Digital Rectal Examination (DRE) လို႔ေခၚတဲ့ စအိုမွတဆင့္ ဆီးက်ိတ္က္ို လက္ျဖင့္စမ္းသပ္ျခင္း၊ အသားစ နမူနာယူျခင္းတို႕ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္လာပါက ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႔ ကုသလို႕ရႏိုင္ပါသလဲ ?
ဆီးက်ိတ္ ကင္ဆာကို ေရာဂါအဆင့္ေပၚမူတည္ျပီး ေယဘူယ်အားျဖင့္ –
အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ကာ ေရာဂါအေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး လိုအပ္ေသာကုသမႈေပးျခင္း
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး သို႕မဟုတ္ ေပါင္းစပ္ကုသျခင္းနည္းျဖင့္ ကုသႏိုင္ပါျပီ။
ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုကာကြယ္လို႕ရႏိုင္ပါသလဲ ?
ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာကို ကာကြယ္လို႕မရႏိုင္ပါ။ သို႕ေသာ္လည္း ေစာစီးစြာသိရွိႏိုင္ပါက ထိေရာက္ေသာကုသမႈျဖင့္ လူ႕သက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
သင့္ ဆီး ႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈ၊ ကုသမႈေတြကို သင့္ေတာ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ –
၀ိဖ၀တီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆးရံုၾကီးရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားသို႕ ၾကြလွမ္းခဲ့ပါလို႕ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါရေစ…
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ လမ္းသစ္ဆီ ႀကိဳဆုိေနမည္ ၀ိဖ၀တီ
အမွတ္ (၁၈၈)၊ ၆၃ လမ္း၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆ လမ္းၾကား
ဖုန္း – ၀၉-၉၅၄၀၅၉၂၀၀၊ ၀၉-၄၀၂၆၅၉၂၀၀။
အမွတ္ ၈၀ C ၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း – ၀၉-၉၅၄၅၆၂၂၂၂။
အမျိုးသားများအတွက် ဆီးကျိတ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာ …
အမျိုးသားအများစုတွင် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာခြင်းနှင့်အတူ ဆီးကျိတ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာ များကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဆီးကျိတ်အရွယ်အစား ပုံမှန်ထက်ပို၍ကြီးထွားခြင်း (BPH-Benign Prostatic Hyperplasia) ၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ (CA Prostate) ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဆီးလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ကာ ဆီးသွားရ ခက်ခဲခြင်း၊ မကြာခဏဆီးသွားခြင်း၊ ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း၊ ဆီးထဲတွင်သွေးပါခြင်း စတဲ့လက္ခဏာများ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။
ဆီးကျိတ်ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေးနေလဲ?
ဆီးကျိတ်ဟာ အမျိုးသားမျိုးပွားအင်္ဂါ တစ်ခုဖြစ်ပြီး သစ်ကြားသီးပုံသဏ္ဍန် ရှိပါတယ်။
ဆီးကျိတ်ဟာ သုတ်ကောင်များ ရှင်သန်သွားလာနိုင်ရန် သယ်ဆောင်ပေးသော သုတ်ရည်ကြည် (Semen) တစိတ်တပိုင်း ထုတ်လုပ်ပေးပြီး သုတ်ကောင်များ အတွက် ချောဆီ နှင့် အဟာရအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ထို့အပြင် ဆီးကျိတ်ကြွက်သားများဟာ သုတ်ပိုးများရွေ့လျားဖို့ ညှစ်ကူပေးပါတယ်။
ဆီးကျိတ််ကင်ဆာ အကြောင်း …
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဟာ အမျိုးသားများတွင် အဖြစ်အများဆုံး ကင်ဆာရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြန့်ပွားမှုနှုန်း နှေးကွေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့််လည်း အချိန်မှီထိရောက်သော ကုသမှုမရရှိခဲ့ပါက အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
တချို့သော ဆီးကြိတ်ကင်ဆာတွေဟာ အလွန်ဆိုးရွားသော အခြေအနေတွင် ရှိနေတတ်သည့်အပြင် ပျံ့ပွားမှု နှုန်း မြန်ဆန်တာကြောင့် စောလျင်စွာ ရောဂါရှာဖွေကာ အချိန်မှီထိထိရောက်ရောက် ကုသမှုခံယူရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကို စောလျင်စွာ သိရှိပြီး ထိရောက်စွာ ကုသလိုက်နိုင်ပါက ရောဂါပျံ့ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး လူ့သက်တမ်းတလျောက် ကျန်းကျန်းမာမာ နေထိုင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသော ကင်ဆာရောဂါများနည်းတူ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဟာလည်း ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းကို သေချာမသိရပေမဲ့ အောက်ပါ အချက်တွေကတော့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ခြင်းကို ပိုမိုုအားပေးကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်။
– အသက်အရွယ် ကြီးရင့်ခြင်း
– မျိုးရိုးတွင် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရှိခြင်း (အဖိုး၊ အဖေ၊ ဦးလေး၊ အစ်ကို စသည်…)
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရောဂါဟာ ဘယ်လို လက္ခဏာမျိုးတွေရှိပြလေ့ရှိသလဲ ?
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအတော်များများမှာ အစပထမပိုင်းတွင် လက္ခဏာ ပြလေ့မရှိကြပါ။
ရောဂါရင့်လာသည်နှင့်အမျှ ဆီးကျိတ်ကြီးသော လက္ခဏာများ ဖြစ်သည့် –
– ဆီးသွားရန် ခက်ခဲခြင်း
– ဆီးသွားသောအရှိန် အားလျော့ခြင်း
– (အထူးသဖြင့် ညပိုင်းတွင်) ဆီးခဏခဏ သွားရခြင်း
– ဆီးသွားပြီးတိုင်း ဆီးကျန်သည်ဟုခံစားရခြင်း
တဖြည်းဖြည်းဆီးကျိတ်ကင်ဆာ လက္ခဏာများဖြစ်သည့် –
– ဆီးပူ/ ဆီးကျဉ်ခြင်း
– ဆီးထဲတွင် သွေးပါခြင်း
– ခါးအောက်ပိုင်း၊ တင်ပဆုံ နှင့် ဆီးခုံ စသည့်နေရာများတွင် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း
– သုတ်လွှတ်ချိန်တွင် နာကျဉ်ခြင်း
– ပါးစပ်ပျက်ကာ ကို်ယ်အလေးချိန်သိသိသာသာလျော့ကျလာခြင်း
– ခြေထောက် အားနည်းခြင်း နှင့် ထုံကျင်ခြင်း စသည့်လက္ခဏာ များပြသတတ်ပါတယ်။
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရောဂါကို စောစီးစွာသိနိုင်ပါသလား ?
– စောစီးစွာ သိနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့သွေးထဲမှ PSA (Prostate Specific Antigen) လို့ခေါ်တဲ့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဓါတ် မြင့်မားမှုပမာဏကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ရှိ/ မရှိ စောစီးစွာ သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
– အကယ်၍ PSA (Prostate Specific Angitigen) လို့ခေါ်တဲ့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဓါတ် မြင့်မားနေပြီ ဆိုပါက သေချာစေရန် Digital Rectal Examination (DRE) လို့ခေါ်တဲ့ စအိုမှတဆင့် ဆီးကျိတ်က်ို လက်ဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်း၊ အသားစ နမူနာယူခြင်းတို့ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်လာပါက ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ကုသလို့ရနိုင်ပါသလဲ ?
– ဆီးကျိတ် ကင်ဆာကို ရောဂါအဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီး ယေဘူယျအားဖြင့် –
o အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ကာ ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်သောကုသမှုပေးခြင်း
o ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ကုသခြင်း (ဓါတ်ကင်ခြင်း)
o ဟိုမုန်းဖြင့်ကုသခြင်း စသည့်နည်းများထဲမှ
တစ်မျိုးမျိုး သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ကုသခြင်းနည်းဖြင့် ကုသနိုင်ပါပြီ။
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရနိုင်ပါသလဲ ?
– ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကို ကာကွယ်လို့မရနိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း စောစီးစွာသိရှိနိုင်ပါက ထိရောက်သောကုသမှုဖြင့် လူ့သက်တမ်းစေ့နေနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့် ဆီး နှင့် ကျောက်ကပ် ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှု၊ ကုသမှုတွေကို သင့်တော်သောစျေးနှုန်းဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများ ရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ –
၀ိဖဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆေးရုံကြီးရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဌာနများသို့ ကြွလှမ်းခဲ့ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ…
ကျန်းမာပျော်ရွှင် လမ်းသစ်ဆီ ကြိုဆိုနေမည် ၀ိဖဝတီ
အမှတ် (၁၈၈)၊ ၆၃ လမ်း၊ ၂၅ နှင့် ၂၆ လမ်းကြား
ဖုန်း – ၀၉-၉၅၄၀၅၉၂၀၀၊ ၀၉-၄၀၂၆၅၉၂၀၀။
အမှတ် ၈၀ C ၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း – ၀၉-၉၅၄၅၆၂၂၂၂။